किन र कसरी देखिन्छ सपना ? - IAUA
किन र कसरी देखिन्छ सपना ?
ramkrishna December 24, 2016	किन र कसरी देखिन्छ सपना ?
सपनाले मान्छेको सोच र भावनामा क्षणिक तर गहिरो प्रभाव पार्छ । मान्छेले मात्र होइन, निदाउने जति सबै प्राणीले सपना देख्छन् । तर, सम्पूर्ण प्राणीको तुलनामा मानव मस्तिष्क अतुलनीय रूपमा विकसित
भइसकेकाले अन्य प्राणी र मान्छेले सपनालाई ग्रहण गर्ने तरिका भने निकै फरक हुन्छ ।
Previous Previous post: तपाई कस्तो सपना देख्नु हुन्छ ? (सपनाको फल)
Next Next post: क्रिसमस र नेपालमा यसको प्रभाव